Olaudah Equiano, oo ah addoon reer Nigeria ah oo noqday nin caan ku ah joojinta - Afrikhepri Fondation
Isniinta, Sebtember 21, 2020
NWuxuu dhashay sanadkii 1745 xilligi maanta Nigeria, Olaudah Equiano ayaa laga saaray tuuladiisa waxaana loo iibiyay addoomo. Wuxuu u adkaystay naxdinta leh ee iskutallaabta dusheeda markab addoomo ah. Sarkaal ka tirsan Ciidanka Badda ee Boqortooyada Ingiriiska ayaa u adeegsaday isaga addoon ahaan intii lagu jiray safarradii u dhexeeyey Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. Markii uu xorriyadda iibsaday 1766, Equiano wuxuu u guuray England wuxuuna ku firfircoon dhaqdhaqaaqa af-duubka. Wuxuu qoray tifatirayaasha joornaalada, wuxuu ka caawiyay abaabul koox madow oo reer London ah oo loo yaqaan wiilasha afrika waxayna weydiisteen taajkii Ingiriiska inay qaadaan tallaabo ka dhan ah addoonsiga. Wuxuu sidoo kale noqday mid ka mid ah dadkii ugu horreeyay ee taariikhda soo bandhiga taariikhda guurka jinsiyeed, kaas oo uu u maleynayay inuu burburin doono caqabadaha midabka iyo dhiirigelinta wada noolaanshaha midabka.
Kaalintii ugu weyneyd ee Equiano ka bixitaanka joojinta ayaa timid 1789, markii uu daabacay lwuxuu sheeko xiise leh ka soo qaatay nolosha Olaudah Equiano, buug gaar ah ayaa hadda loo tixgeliyaa mid ka mid ah akoonnadii ugu horreeyay ee addoonsiga. Buuggu wuxuu ahaa mid wax soo iibiya, oo sannado badan ayuu ku soo booqday inuu booqdo Jasiiradaha Ingiriiska isla markaana adeegsado taariikhdiisa nololeed si uu u muujiyo xumaanta addoonsiga. Equiano wuxuu dhintey 1797 (toban sano kahor Britain intayan baabi'in ganacsiga).
Qoraalka Equiano runti waa ficil millatari, laakiin sidoo kale waa xusuus-qor, sheeko ka buuxa qalloocinta, la kulanka, daahfurka. Ninkii wuxuu sheegaa sheekadiisa wuxuuna muujinayaa aqoonsiyadiisa. Madowga Afrikaanka ah, addoonsiga, socdaalka, nin iskiis u sameeyay iyo astaanta xorriyadda. Sheekadan waxay caan ku tahay Mareykanka iyo Ingiriiska. Waxay noqotay waxbarasho caadi ah oo lagu barto jaamacadaha, si ballaaran ayaa loo qaybiyaa.
Sheekadayda dhabta ah: Afrikaan, addoonka ah ee America, nin xor ah
6 cusub oo ka yimid € 8,50
12 waxaa laga isticmaalay € 4,50
Iibso 8,50 €
laga bilaabo Sebtember 21, 2020 11:23
Taariikhda lagu sii daynayo 2008-06-19T00:00:01Z
Publication Taariikhda 2008-06-19T00:00:01Z